बहुमतको दम्भले अर्कोलाई मिच्दै जाने हो भने व्यवस्था नै उदांगो हुन्छ (युवराज बास्कोटा) - Pradesh Dainik
बहुमतको दम्भले अर्कोलाई मिच्दै जाने हो भने व्यवस्था नै उदांगो हुन्छ (युवराज बास्कोटा)
बुधबार, साउन १५, २०७६ , प्रदेश दैनिक
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि दोस्रो पुस्ताका रुपमा चर्चा कमाएका दर्जनौं राजनीतिक पात्रमध्ये एउटा नाम हो । परम्परागत आँखाबाहिर निरन्तरको खोज–अनुसन्धान र अध्ययनमा विश्वास गर्ने उहाँ यतिबेला नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलप्रवाहको रुपमा उभिएको एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेश नम्बर १ को सदस्य हुनुहुन्छ । जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा प्रतिपादित र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सिद्धान्तका हिसावले स्थापित बिचार– जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)प्रतिको गहिरो लगाव र बुझाइ राख्नुहुने उहाँ राजनीतिक विषयवस्तुको सुक्ष्म विश्लेषण र संश्लेषण गर्न सक्ने एकजना अध्येता युवानेताको रुपमा चिनिनुहुन्छ ।
साविक एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको वैकल्पिक केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको उम्मेदवार उहाँ ९ मतले पराजित हुनुभयो । स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँसँग पार्टीको बैदेशिक मामिला सम्बन्ध र विदेशमा रहेर श्रमोपार्जन गर्ने नेपाली समुदायमाझ काम गर्नुभएको राम्रो अनुभव छ ।
प्रायशः सामाजिक सञ्जालमा अपडेट हुने उहाँ दीर्घकालीन महत्व राख्ने सामाजिक गतिविधि, राजनीतिक, सैद्धान्तिक र बैचारिक विषयहरूमा दैनन्दिन आफ्ना धारणालाई निर्धक्कतापूर्वक राखिरहनुभएको हुन्छ । आफ्ना हुन् वा पराय; तिखो ढंगले कटाक्ष गर्नेदेखि लिएर अबको राजनीतिलाई सिर्जनशील काम र यी काममार्फत समाजको समग्र विकास, निर्माण र उत्पादनसँग जोड्न अभिप्रेरित तुल्याउन उहाँका लेखनहरू निष्ठाको खेती गर्नेहरूका लागि सहयोगी देखिने चर्चासमेत हुने गरेको पाइन्छ ।
औसत सामान्य अवस्था र भद्रता उहाँको एउटा भिन्न गुण हो । शालिन स्वभावमा देखिनु/भेटिनुहुने उहाँले प्राप्त गर्नुभएको पद, प्रतिष्ठा र नेतृत्व निकटको विश्वासलाई कहिल्यै पनि कुनै दम्भ र अहंकारको रुपमा पस्कने गर्नुभएको छैन ।
पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा नं. १० स्थायी निवासी उहाँ विगतमा नगर प्रमुखको उम्मेदवारको रुपमा व्यापक चर्चामा रहनुभयो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूको एकीकरणको प्रक्रिया त्यहीं बेला अघि नबढेको भए तात्कालीक नेकपा (एमाले) बाट प्रदेश निर्वाचनका लागि टिकट पाउने कुरा सुनिश्चित प्रायः थियो । पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया आरम्भ र चुनावी तालमेलका कारण उहाँ यो अवसरबाट पछाडि धकेलिनुभयो ।
यतिबेला नेता बास्कोटाको दिनचर्या, राजनीतिक जीवन, नेकपा निर्माणको प्रक्रिया, समग्र पार्टी गतिविधि, केही कूटनीतिक सम्बन्ध, स्थानीय सरकार सञ्चालन, स्थानीय स्तरका समसामयिक विषयवस्तुका सन्दर्भमा प्रदेश दैनिकका लागि भूभिप्रासद पाठकले गर्नुभएको साक्षत्कारको सम्पादित संक्षिप्त अंश यहाँ राखिएको छ ः–
आजकाल दिनचर्या कसरी बिताइरहनुभएको छ ?
ग्रामीण कृषक, कृषकको उत्तराधिकारी सन्तान । बर्खायाम लागेको छ । हिजोआज अलिक बढी समय खेतीमा संलग्न रहँदै आएको छु । रोपाईं सकेपछि पूनः नियमित दिनचर्यामा फर्कने छु । लामो समयसम्म पार्टी काम र भूमिकाविहिनताको अवस्थामा थिएँ । यो समयलाई सामयिक विषयवस्तुहरूको अध्ययनमा लगाएँ । राजनीतिक जीवनमा सरोकार राख्ने विषयवस्तुको अध्ययन पनि एउटा अनिवार्य काम हो भन्ने बुझेको छु । घरैमा अध्ययनकक्ष बनाएको छु । सामान्यतया दुइघण्टा अनिवार्य पढ्ने लेख्ने गर्दछु । यो नियमित र अक्षुण्य पक्ष हो । पछिल्लो समयमा आएर पार्टीको समोचित् व्यवस्थापन हुँदै गएको छ । पार्टीले मलाई प्रदेश कमिटी सदस्यको रुपमा जिम्मेवारी तोकेको छ । यो साँध सिमाभित्र रहँदै पार्टी नेतृत्वसँग अब पार्टीलाई नीतिगत र बैचारिक हिसावले पार्टीलाई कसरी समृद्ध र संगठित तुल्याउन सकिन्छ ? छलफल र विमर्शमा छु ।
पार्टी राजनीतितिर कसरी आकर्षित हुनुभयो ?
म यहिं तल जनता माविको कखराकालीन विद्यार्थी । अहिले मलाई जान्ने अग्रज बुढापाका भन्नुहुन्छ– सानैदेखि अलिक विद्रोही स्वभावको थिएँ । अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचो सहन सक्दैन थिएँ, मन पर्दैन थियो । यहीं स्वभावका कारणले पनि हुन सक्छ म ०४५ मध्यान्तताका तात्कालीन अनेरास्ववियु (एकताको पाँचौं) सँग जोडिन पुगेँ । यसैको स्प्रीटबाट आएको विद्यार्थी कार्यकर्ता हुँ । जनता मावि, पथरीबाट २०४९ मा क्ीऋ सकेर घरको चरम गरिबी र अभावका कारण भारतको मथुरा गएँ । अध्ययन आरम्भ गरेसँगै अनेरास्ववियु (एकताको पाँचौं) को सम्पर्कबाट अभानेस्ववियुमा आबद्ध भएँ । यसको प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटी सदस्य, सचिव, महासचिव र अध्यक्ष भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरें । यसबीचमा प्रत्यक्ष ढंगले पार्टी कामसँग जोडिएँ । पार्टीको पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर प्रवासमा दशक गुजारें । प्रवासी नेपाली संघ भारतको महासचिव भएर एक कार्यकाल काम गरें । ऐतिहासिक नेकपा (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा म भारत प्रवासबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएँ । महाधिवेशनमा म वैकल्पिक केन्द्रीय कमिटी सदस्य उम्मेदवार भएँ । ९ मतान्तरले पछि परें । अहिले पार्टी कामको जिम्मेवारी देशभित्र सरुवा गराएर स्थानीय गतिविधिहरूमा संलग्न रहँदै आएको छु ।
एकजना पढालेखा युवा राजनीतिकर्मी हुनुका नाताले राजनीति र युवा पलायनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आह ! कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । पढालेखाले नै नेपाली राजनीतिको जग हाले । चाहे त्यो पुष्पलाल, मनमोहनको कुरा होस् वा विपि कोइराला, गणेशमानको कुरा होस् ! राजनीतिक जग वा यसभित्र राजनीतिक धारको विकास पढालेखा पुस्ताबाट आरम्भ भएको छ । संगठन निर्माण र विकास–बिस्तारक्रममा, अझ संसदीय व्यवस्थामा आइपुगेपछि त तीघ्रा, पाखुरा अथवा मनि र मसल आकर्षित भयो । जब यो मनि, मसलवाला पक्ष नीति निर्माणको तहमा हावी भयो, तब आएर यसको उपस्थितिले राजनीतिक मर्मलाई कमजोर बनायो ।
राजनीति भनेको प्रचलित थुप्रै नीतिको माऊ नीति हो । माऊ नीति भनेको समाज हाँक्ने, चलाउने मूल स्रोत हो, मेकानिकको भाषामा इञ्जीङ हो । मूल इञ्जीङ नै खराब हुन्छ भने मातहतका अंगहरू हुन्छ के ? सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । समाज विज्ञानको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा अध्ययन चिन्तन भएन भने दृष्टिकोण बन्दैन । दृष्टिकोण बनेन भने बिचार बन्दैन । बिचार बनेन भने व्यवहार परिस्कृत हुँदैन । बिचार परिस्कृत भएन भने हामीले आफ्नो उपस्थिति केका लागि छुट्याउन सक्दैनौं । हिजो र आजबीचको वस्तुगत उपस्थितिलाई बुझ्न सक्दैनौं । हिजो र आजबीचको भिन्न अथवा फरकपन छुट्याउन सक्दैनौं । भौतिक परिस्थितिले सिर्जना गरेको भिन्नपनबारे जान्न पनि यथोचित अध्ययन आवश्यक छ । अध्ययन अभावमा अहिले कतिपय स्थानीय सरकार सञ्चालनका अगुवाहरू र माननीय भइखाएकाहरूलाई हेर्दा हामीलाई लाज हुन्छ, कुरीकुरी लाग्छ । अध्ययन भनेको विश्वविद्यालयीय ज्ञान मात्र होइन, अनौपचारिक ढंगले समाज र समाजको वस्तुगत अवस्थाउपरको अध्ययन पनि अध्ययन नै हो । यसतर्फ हाम्रो ध्यान त जानुप¥यो नि ! छैन ।
जहाँसम्म युवाश्रमको कुरा गर्नुभयो । अहिले दुई ढंगले युवाश्रम पलालय भएको छ । श्रमोपार्जनका लागि देशबाहिर जाने युवाको संख्या निकै ठूलो छ भने अर्कोतिर माद्यमिक तहको अध्ययनपछि उच्च शिक्षार्जनका लागि देशबाहिर जाने र उतै स्थायी हुने युवाको संख्या पनि निकै उल्लेख्य र आशलाग्दो छ । युवा वास्तवमा त्यो बेला हो, जसले संसार जुरुक्क उठाएको सपना देख्छ र जिम्मेवारी बोक्छ । आर्मी पुलिसमा भर्ति हुने बेलामा मात्र युवा चाहिन्छ भन्ने होइन । राजनीतिमा पनि युवाकालले अत्यन्तै महत्व राख्छ । पुष्पलाल युवा भएकै बेला उहाँको अगुवाइमा नेकपाको स्थापना भयो । मनमोहन युवा भएकै बेला पुष्पलाल नेतृत्वको निर्माणकालीन कम्युनिष्ट आन्दोलनको सहज नेतृत्व गर्नुभयो । मदन भण्डारी युवा भएकै बेला गहन अध्ययनपछि एउटा नवीकृत र युगीन बिचारको प्रतिपादन गर्नुभयो । प्रचण्ड युवा भएकै बेला युगान्तकारी जनयुद्धको कमाण्ड सम्हाल्नुभयो । बिपि कोइराला युवा भएकै बेला पूंजीवादी समाजवाद उन्मुख रहने कार्यक्रमिक मान्यता अघि सार्दै नेपाली काङ्ग्रेसको निर्माण र लामो समयसम्म नेतृत्व गर्नुभयो । महात्मा गान्धी युवा भएकै बेला बृटिश साम्राज्यका विरुद्ध स्वतन्त्र भारतको आवाज संगठित गर्नुभयो । माओ युवा भएकै बेला चीनियाँ क्रान्तिको नेतृत्व गर्नुभयो । युवा बेलाकै नेल्सन मण्डेलाले काला र गोरा समुदायबीचको भयावह कटुता अन्त्य गर्नुभयो । कालीदास, भानुभक्त, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालगायत दर्जनौं स्रष्टाहरूले युवा भएकै बेला एउटा भिन्न महत्वको प्रतिभा विकास र संस्कार निर्माण गर्नुभयो । राइट ब्रादर्श युवा भएकै बेला हवाई जहाजको परिकल्पना र यसको सफल प्रयोग गर्नुभयो । हाकिङ्स युवा भएकै बेला वायु वाष्पीकरणको विज्ञान पत्ता लगाउनुभयो । प्रेसर कुकर तयार गर्नुभयो । यस्ता सयौं उदाहरणहरू छन्, जसलाई युवा अवस्थाका देनका रुपमा अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
हामीकहाँ भने हामीले युवालाई युवाभाव, युवाजोश, युवाजाँगरको रुपमा थेग्न, संगठित गर्न र योग्यता–क्षमतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा युवाश्रम अग्रपंक्तिमा खर्च भयो, उत्सर्गित भयो । तर, युवालाई श्रमसँग, उत्पादनसँग, निर्माणसँग र प्रतिस्पर्धामा आधारित बजारसँग जोड्न सकेनौं । परम्परागत उत्पादन प्रणालीलाई अद्यावधिक र आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा युवापन, युवामन र युवाश्रम देशबाहिरिएको छ, क्रमशः पलायन भएको छ । देशबाहिरिएको युवा कहिलेकाँही त बन्द बाकसमा फर्कने गर्दछ । यो ठूलो दुर्भाग्य हो ! यसलाई रोक्न र नेपाली आकाशमुनि खपत गर्न सकिएन भने अपेक्षित सफलता हाता लागी हुन सक्दैन ।
आजको युवा पढालेखा छ । प्रविधिमैत्री छ । जोशजाँगरले भरिएको छ । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा चाहिने जनशक्तिको रुपमा तयार छ । तर, समयोचित प्रयोग र प्रयोगका लागि नीतिगत योजना तल–तलसम्म बन्न सकिरहेको छैन । यसलाई आ–आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेर तीनवटै तहगत सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । प्रविधि, पूंजी र अनुभव सम्पन्न युवाकै साझेदारीमा युवा खपत कार्यक्रमहरू आयोजना गर्न सकिन्छ । यसबारे अभिलम्ब गृहकार्य आरम्भ गरिनुपर्छ । वास्तवमा हिजो एउटा कालखण्डमा ठूलो त्याग गरेको, आवश्यक योग्यता–क्षमता बोकेको युवा सम्मानजनक ढंगले व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिलेको युवा पूर्वाद्धको पिढीं राजनीतिप्रति बितृष्णाको शिकार भइरहेको छ । राजनीतिक काम र जिम्मेवारी लिने सन्दर्भमा नजिकिन सकेको छैन । यो राम्रो कुरा होइन । योक्रमलाई रोक्न सकिएन भने कमजोर मानिसले शासन गर्ने, नीरिहहरू शासित हुने र आशलाग्दो युवा पलायन भइरहने खतरा पनि उत्तिकै बल्दो छ ।
तपाईं नेतृत्वको पार्टी सरकारमा छ । सरकारको विरोध गर्नेहरू चौतर्फी छन् । विरोधका स्वरहरू गुञ्जिएको अवस्था छ । यसलाई तपाईं कसरी लिनुहुन्छ ?
सतही ढंगले हेर्दा हो यो ठीकै हो । तपाइले भन्नुभएझैं नेकपा नेतृत्वको सरकार छ । सरकार बहुमतको छ । विरोधका आवाजहरू चौतर्फी छन् । यस्तो किन होला ! तर, यस्तो मात्र होइन । यसलाई म अलिक फरक ढंगले बुझ्छु । जस्तो कि सरकारमा जो कोही होस्, सरकारसमक्ष जनमतको एउटा अपेक्षा अनिवार्य हुन्छ । त्यो अहिल अलिक बढी छ । यी अपेक्षाहरूलाई अलिक बढी तीब्र बनाइएको छ । यसलाई स्वभाविक ठान्नुपर्छ । यो आफैमा विरोध होइन । विरोधका लागि विरोध गर्नेहरूका सन्दर्भमा मैले केही भन्नु छैन । यसबाहेक अभिभावकसँग बालबच्चाको अपेक्षालाई विरोध भनेर बुझ्न हुँदैन । कहिलेकाँही ठूलो घरमा भएको घरसल्लाह पनि छिमेकीलाई झगडाझैं लाग्छ । तर, त्यो झगडा चाहिँ हुँदैन । अर्को कुरा, यतिबेला सरकारको एकोहोरो चर्को विरोध, तीब्र आलोचना, गहिरो निन्दा वा भत्र्सना आदि पक्ष सत्ताको वरिपरि प्राप्त हुने शानमान, सेवा, सुविधा र लाभसँग साटिन नपाउनुको पीडा, आग्रह, हतासका अभिव्यक्ति र कुण्ठागत परिस्थितिको उपज होजस्तो लाग्छ । यो ठूलो कुरा होइन । राजनीतिमा यसखालको प्रवृत्तिलाई स्वभाविक ठान्नुपर्छ र सत्तापक्षले सहनुपर्छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आफ्नो घोषित राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न चुक्नुहुन्न । निर्वाचनताका जनतासँग गरिएका बाचाकबोललाई र सरकारका तहबाट नीति कार्यक्रममार्फत गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई निशर्त पूरा गर्नुपर्छ, पूरा गर्न संकल्पकृत रहनुपर्छ । निर्मित योजना कार्यान्वयनसँगै समयक्रममा धेरै विषयहरू क्रमशः सम्बोधन, समाधान र व्यवस्थापन हुँदै जान्छन् ।
सरकारले बारम्बार भनेको छ– पहिलो वर्ष समाजवाद उन्मुख चरित्रको कार्यक्रम निर्माणको आधार वर्ष रह्यो, ऐन कानुन निर्माणको वर्ष रह्यो र समग्रतामा यो सिकाइको वर्ष रह्यो । अब गति लिन्छ । लिएको पनि छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा पृथक पहिचान विकास गर्दै अघि बढेको छ । यसका वावजुद कसै–कसैले सरकारको विरोध गर्नु आफ्नो कर्म लिएर जन्मिएजस्तो भान पर्ने गरी विरोध भइरहेको अवस्था देखिन्छ । सरकारको विरोध गर्नुमा गर्व ठान्नेहरू प्राप्त पोषणको प्रतिफलस्वरुप उफ्रिरहेका छन् । यी छुद्र प्रवृत्तिको प्रतिउत्तर दिएर सकिन्छ ? सकिँदैन । यिनलाई त कामले, इमानले र जुवानले जवाफ दिने हो ।
विरोधको पनि हद हुन्छ नि ! यसपहिले अमृतजन्य पदार्थ खाएको र प्रधानमन्त्रीको रुपमा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आएपछि उहाँले विषाक्त खाने कुरा खुवााएजस्तो गरी विरोध भइरहेको छ । यो कुनै तर्क हो ? उहाँले विषादिको मात्रा पत्ता लगाउने र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न लाग्नुभएको छ । यसलाई सराहना गर्ने कि विरोध !
बाढी पहिरो र यसको प्रकोप बढिरहेको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बर्खायाममा बाढी पहिरो आउने कुरा कुनै अनौठो र ठूलो कुरा भएन । कुरा यसको प्रभावको हो । बाढी पहिरोभन्दा पनि मलाई त बाढी पहिरोअघिको खडेरी अथवा सुखायाम र बाढी पहिरोपछिको व्यवस्थापन गाह्रो लाग्छ । बाढी पहिरो र यसको प्रभावलाई न्युन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । संघीय सरकारले चासो लिइरहेको छ । प्रदेश सरकार प्याकेजमा राहतका योजनाहरू अघि सार्दै आएको छ । स्थानीय सरकार पनि आफ्नो बुता अनुसार राहतमा लागेको देखिन्छ । जुन कुनै मूल्य चुकाएर भए पनि नागरिकको न्युनतम् सुरक्षा र सेवाबृद्धिमा सरकार लाग्नैपर्छ । सरकार हुनुको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ ।
समस्या कहाँ छ भने हामी उपभोक्ता स्वयं कहिलेकाँही कतिपय बेलामा प्रकृतिमाथि नै हिंस्रक बनेर जाइलाग्छौं र प्रकृतिको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छौं । हामी र प्रकृतिबीच परस्पर द्वन्द्व निम्त्याउछाँै । यसको प्रतिफलस्वरुप विनाश पाएका छौँ । खोलानाला आफ्ना ठाउँ थलामा कुद्न पाउँदैनन् । खोलानाला दुब्लाएका बेला हामी साहसिक बन्छौँ र ऊ बलशाली बनेका बेला हामी गुहार लगाउँछाँै । खोलानाला मिचेर घर बनाइएका छन्, शहर बसाइएको छ । चुरे दोहन गरिएको छ । यस्तो बेलामा विनाश नभए, के हुन्छ त ! अब हामीले नीतिगत रुपमा प्रकृतिको विनाश रोक्नुपर्छ । सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिइरहँदा चुरेको दोहनबारे सोच्नुपर्छ । तत्काल बाढी पहिरो र डुबानका कारण भएको नोक्सानी, मानवीय क्षति, बेघरबारको अवस्था, खेतीको नोक्सानी, उद्योगधन्दामाथिको नोक्सानी आदि पक्षलाई विशेष राहत प्याकेज अघि सार्नुपर्छ । राहतस्वरुपका कार्यक्रममार्फत पीडा र क्षतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
नीतिका हिसावले रोडा, ढुंगा, गिटी, बालुवाको ओसारपसार, जथाभावी उत्खनन्, चुरेलगायत क्षेत्रको दोहन रोक्नुपर्छ । यसमाथि वैकल्पिक उयायबारे सोच्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा लागेर अर्थराजनीति आर्जन गर्ने मनाशयबाट हामी जो कोही पनि मुक्त हुनुपर्छ । प्रकृति र मानवबीचको सम्बन्धको सन्तुलित पक्षलाई धेरै दखल दिनुहुँदैन ।
स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकार सञ्चालनका यी दुई वर्षहरूलाई हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनको राजनीतिक पक्षलाई कसरी लिनुभएको छ ?
साह्रै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । हेर्नुस्– आज हामीले भोग गरेको राजनीतिक राज्य व्यवस्थाको चरित्र भनेको पहिचानमा आएको आमजनमतको अनिवार्य सहभागितामा नीति–कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड दिँदै समाजवादको आधारशीला तयार पार्नु हो । जनमतलाई सम्मान गर्ने, जनमतसामु आफ्ना प्रस्तावित विषयवस्तुहरू राख्ने, समुहगत र विषयगत गृहकार्य गर्ने, परिस्कृत ढंगले व्यापक जनताको समर्थनमा अनुमोदन गर्दै लैजाने हो । यस्तो अभ्यास भएको त म कहीं देख्दिनँ । भरखरै लेटाङ नगरसभामा एउटा शक्तिले बहुमतको दम्भमा अर्कोलाई मिच्यो । यसले संघीयता कार्यान्वयनको राजनीतिक मर्मलाई बोक्न सक्छ त ? अहँ । सक्दैन । यी केही यस्ता संकेतहरू हुन्, जसले व्यवस्थालाई उदांगो पारेका छन् ।
कुरा यहाँको मात्र होइन, देशभरकै संरचनालाई आधार मान्ने हो भने चाहे स्थानीय सरकार सञ्चालनको कुरा होस् वा प्रदेश सरकार ! स्थिति के छ भने सबै दोष, आलोचना, घृणा, निन्दा, भत्र्सना आदि संघीय सरकारलाई ठोकिन्छ । जवाफदेहिता संघीय सरकारको मात्र भएजस्तो गरी मातहतका सरकारहरूको रवैया छ । अरु चाहिँ के थान थपना मात्र हो त ? होइन नि !
जनसहभागिताको सन्दर्भमा प्रत्येक मानिस जश अपजशको हकदार बनेन भने उसले कसरी अपनत्वबोध गर्छ ? तपाईं यो समाजको एकजना सरोकारवाला जिम्मेवार व्यक्ति । कुनै विषयमा तपाईंको संस्थागत वा व्यक्तिगत राय लिने काम गरियो ? गरिएन नै होला ! यसको अर्थ तपाई बेवास्ताको शिकार बन्नुभएको हो । अब तपाईंले कसरी सगर्व पद्दतिलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ ? गर्नुहुन्न । जनप्रतिनिधिहरू खुब दौडधुपमा देखिन्छन् । स्थानीय जनमतसमक्ष विषयगत राय परामर्श लिने गरेको कहिल्यै देख्नुभएको, भेट्नुभएको र यसबारे समाचार लेख्ने गर्नुभएको छ ? छैन नि ! यस्तो अवस्थामा आममानिसले कसरी अपनत्वबोध गर्ने ? पञ्चायतको विकल्प यो राजनीतिक प्रणाली खोज्नुको अर्थ यो प्रणाली सबभन्दा राम्रो भएर हो नि ! होइन र ? राम्रोपन दिन सकिरहेका छौं त ? छैनौं । राम्रोपन दिन सकिएन भने जनमत कहिल्यै स्थायी हुँदैन । जसरी यसपटक हामीले जनमत पायौं, उसैगरी अर्कोपटक जनमत अर्काको हुन सक्छ ! यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक गृहकार्य अनिवार्य छ । यस्तो बेलामा बितृष्णा बढ्नु स्वभाविक हुन्छ । तर, यसलाई हामीले नै रोक्नुपर्छ ।
संवैधानिक परिकल्पना मात्र होइन, व्यवस्था कार्यान्वयनसँग जोडिएको यसको अन्तरनीहित पक्ष के हो भने स्थानीय सरकारको भूमिका भनेको बिरामीसँग डाक्टरको उपस्थितिजस्तै हो । व्यवस्थापकीय पारदर्शितासँगै स्थानीय सेवाग्राहीलाई सरकारको तर्फबाट सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने स्थानीय सरकार हो । स्थानीय जनमतलाई शक्ति÷सामथ्र्य उपलब्ध गराउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । यो मर्मभित्र काम सम्पादन भएको छ त ? अहँ, छजस्तो मलाई लाग्दैन । अनियमितता, भ्रष्टाचार र बेथीतिहरू त मौलाउँदै गएकै छन् । अपवादबाहेक अधिकांश स्थानीय सरकार सञ्चालन र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा शतप्रतिशत सफल भएको मलाई लाग्दैन । तथापि, म एक दुइवटा सरकार, शासक, नीति निर्माताका कारण यो संघीयताको विषयमा केही भनिहाल्ने अवस्थामा छैन । भविष्यबाणी गर्नु हुँदैन । झ्वाट्ट भनिहाल्न कहिलेकाँही प्रतित्पादक हुन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा तिखो प्रहार सहित देखिनुहुन्छ । प्रशस्तै कमेण्टहरू आएका हुन्छन् । यसबाट प्राप्त हुने सुझावलाई कसरी लिने गर्नुभएको छ ?
हो । म अलिक बढी लेख्छु । अनिवार्य केही न केही पढेको हुन्छु । पढेपछि यसबाट निकालिएका केही निष्कर्षहरूलाई लेख्न मन लाग्छ, लेख्छु । राजनीतिक, सैद्धान्तिक, बैचारिक र सामयिक विषयवस्तुउपर लेख्छु । लेखिन्छु र देखिन्छु । यो ठूलो कुरा भएन ।
म तीघ्रा नापेर आजको निर्माणको राजनीति हुन्छ भन्ने ठान्दिनँ । यसको राजनीतिक, बैचारिक पक्ष अध्ययन र सैद्धान्तिक मापन गर्न अध्ययन चिन्तन–मन्थन आवश्यक हुन्छ । यसबारे प्रशस्तै सामग्रीहरू गुगलमा पाइन्छ । गुगलले पस्कने सामग्रीहरूको विविधताभित्र रमाउन पनि सामाजिक सञ्जाल उपयुक्त ठाउँ थलो बनेको छ÷हुन्छ । मेरो नामको सामाजिक सञ्जाल मेरो व्यक्तिगत मत/अभिमत राख्ने थलो हो । यो नितान्त निजी हुन्छ । निजी मतहरू राख्छु, लेख्छु । मेरो मतमाथि मन पर्ने, नपर्ने दुबै जातधर्मका व्यक्तिले केही न केही लेखिरहेका हुन्छन् । यो प्रतिक्रियालाई स्वभाविक ग्रहण गर्छु । प्रतिक्रियालाई आफ्नो मतसँग दाँजेर हेर्छु, केलाउछु र आवश्यक परे सच्च्याउछु । कसैले मेरो तेजोबध गर्न लेखेको हुन्छ, यसलाई उसको चेतना अथवा उसले आर्जन गरेको समग्र विधा हो भनेर स्वभाविक ठान्दछुु । तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ– कहिलेकाँही पत्रपत्रिकामा मेराविरुद्ध जेहाद छेडिन्छ, निस्तेजको मनोविज्ञान प्रेरित अक्षराम्भ गराइन्छ । यसलाई पनि स्वभाविक ढंगले ग्रहण गर्ने गरेको छु । तथापि, राजनीतिक बैचारिक विषयलाई उठान गर्ने जोड गरेको हुन्छु । कसै–कसैले खुब चित्त दुखाएका पनि हुन्छन् रे ! कठै, तिनको चेतना भन्छु । प्रतिवाद गर्दिनँ । आउनुप¥यो नि तिनलाई लेख्न भन्ने आग्रह पनि पाल्दिनँ । यो मेरो समाज हो । सामाजिक प्रगतिको मापन गर्नुपर्छ । चिन्तनमा आएको यो खोट समाजको तीब्र विकास र प्रगतिको बाधक हो भन्ठान्दछु ।
मानिस हातमा स्मार्ट मोबाइल बोक्छ । आएको फोन रिसिभबाहेक अधिकांश विकल्पमा जान सक्दैन । दोष कसको ? मोबाइलको ? टेलिकमको ? एप्सहरूको ? उपलब्ध सुविधाहरूको ? समग्र प्रणालीको ? अनुत्तरित प्रश्नहरूमा हराउछु । प्रविधिमैत्री स्वचालित समाज कहिले होला ! परिकल्पना गर्दछु । वास्तवमा हामीले हो यहिंनेर फड्को मार्न आवश्यक छ भन्ठान्दछु ।
निजात्मक बिचार सम्प्रेषणको थलो सामाजिक सञ्जाललाई स्वभाविक लिनुपर्छ । निजी जीवन र निजी मामिला हो भनेर लिनुपर्छ । चित्त परे ग्रहण गर्ने, नपरे छोड्दिने गर्नुपर्छ । कतिपय सार्वजनिक पद धारण गरेको विशिष्ट व्यक्तिहरूले बिचार न सिचार सेलिब्रेटीझैं तस्बिरहरू टाँसेर सामाजिक सञ्जालमा छाडेका हुन्छन् । उनीहरूप्रति दया जागेर आउछ । यिनको उपस्थितिले एउटा बिचार, व्यवहार, दर्शन, संस्कार आदि दिनुपर्ने, किन तस्बिर मात्र दिएछ ! भन्ने लाग्छ । हुन त यो पनि निजी मामिला हो । तथापि, सामाजिक व्यक्तित्वसँग समाजको अपेक्षा हुन्छ, सकारात्मक प्रेरणाका लागि समाज लालयित हुन्छ ।
तपाईं नगरको प्रमुखको आकांक्षी उम्मेदवार । यदि, तपाईंले यो अवसर पाएको भए के गर्नुहुन्थ्यो ?
हा हा ! अब के भन्ने र खोई ! यो दलीय व्यवस्था हो । यहाँ दल प्रधान हुन्छ । मलाई मसम्बद्ध राजनीतिक दलले टिकट दिएन । किन दिएन ? मैले किन टिकट पाइनँ ? यसबारे आवश्यक परे समयक्रममा चर्चा गरौंला । अहिले त्यसतर्फ नजाऔं !
मैले यो अवसर पाएको भए सिस्टम र संस्कार बसाल्ने कुरामा पक्कै जोड रहन्थ्यो नै । समुहगत र विषयगत सहकार्यबाट काम सम्पादन गर्दै अघि बढ्ने प्रयत्न हुने थियो । आफूसम्बद्ध राजनीतिक दलको राजनीतिक दिशानिर्देश, सहअस्तित्व भएकाले सहयात्री दलले अघि सारेका सरोकारित मूल्यमान्यताहरू, हिजोका हाम्रा राजनीतिक प्रतिबद्धताहरू, जनताका स्वभाविक अपेक्षाहरू, आज उघ्रिएका आवश्यकताहरू र कतिपय स्थानीय सन्दर्भलाई विषयगत ढंगले केस्रा–केस्रा पार्ने थिएँ । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध राजनीतिकर्मीहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू, विषयगत स्रष्टाहरू, विषयविज्ञहरू र सरोकारवालाहरूको राय–परामर्शमा नीति–कार्यक्रम निर्माणको अगुवाई गर्ने थिएँ । व्यवस्थालाई अँध्यारो कोठामा बसेर होइन, उज्ज्यालो खुल्ला मैदानमा उभिएर अघि बढाउने प्रयत्न गर्ने थिएँ । हामीसँग यहाँ राजनीतिक रुपले क्रियाशील र दशकौंसम्म गरेको योगदानले खारिएका, अनुभवले माझिएका, विषय विषयको अध्ययनले श्रृङ्गारिएका दर्जनौं सम्मानित र प्रतिभावान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । अगाध आदरभावका साथ उहाँहरूलाई दाहिना राखेर स्थानीय परिवेश, परिस्थिति र वस्तुगत अवस्था अनुरुप चल्ने प्रयत्न गर्ने थिएँ । अरु त यस्तै–यस्तै हो । यद्यपि, सबैले अपनत्वबोध गर्न सक्ने अवस्था भने सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो ।
डालामा पर्ने नियमित बजेट बाँडफाँडका अतिरिक्त सहयोगी संघसंस्थासँग सहकार्यका लागि प्रयत्नशील रहने थिएँ । म एउटा समाजशास्त्रको विद्यार्थी, विकासका मोडलहरूलाई पढेको मात्र होइन, यस अभ्यासलाई नजिकैबाट अध्ययन पनि गरेको छु । भौतिक निर्माण र पूर्वाधार विकासभन्दा बढी मानव संसाधनको पक्षमा जोड दिने थिएँ । मेरो बुझाइमा मानिसको चेतना उठ्यो भने उसको जीवनशैली उठ्छ । जीवनशैली उठ्यो भने उसको व्यवहार उठ्छ । व्यवहार उठ्यो भने आयआम्दानीको अवस्था आफै उठ्छ । यो पथरी बजार आफैमा यसको नमुना हो । यहाँका भौतिक निर्माणका पक्षहरू, बाटाघाटा निर्माण र शहर व्यवस्थापन आदि पूरापुर सरकारले गरेको होइन, स्थानीय सचेत समुदायले एक्लै वा साझेदारीमा गरेको हो । यहीं कुरा अन्यत्र पनि लागू हुन सक्दैन र ? पक्कै सक्छ । मानिसको आत्मगत अवस्था उठाउन प्रयत्नशील रहनुपर्छ । अहिले पक्ष यो गौण देखिन्छ ।
लोकतन्त्र भनेको जनमतमार्फत गठित जनताको शासन व्यवस्था हो । यसभित्र अनिवार्य रहनुपर्ने स्वच्छता र पारदर्शिता यसको कार्य–श्रृङ्गारको पक्ष हो । यसले अनियमिततालाई किनारा लगाउँछ र विश्वसनियता बढाउँछ । कतिपय ठाउँ र सन्दर्भमा पारदर्शिता र विश्वसनियता अभिबृद्धि शंकाको घेराबन्दीमा छ । यसलाई स्वतः स्फुर्त चलायमान तुल्याउन अहिले हामीकहाँ एउटा परिस्कृत राजनीतिक संस्कार र सिस्टम अभाव खड्किएको छ । म मात्र होइन, जो कोही आए पनि यो संस्कार र सिस्टम बसाल्न अब चुनौति बनेको छ ।
नगरपालिका भवन निर्माणको विषय छताछुल्ल भएर उठिरहेको छ नि ! भन्न सक्नुहुन्छ– आखिर कुरोको चुरो चाहिँ के हो ?
सरकार बनेसँगै बढेका जनअपेक्षामध्ये एउटा यो पनि हो । केवल यसको सन्दर्भ अलिक फरक छ । नगरपालिका भवन निर्माणको विषय अनिवार्य भएको सन्दर्भमा यो एउटा प्राथामिक विषय हो । नत्र, यो भए के के न हुने, नभए के के न बिग्रने भनेर यसलाई उत्पाद महत्व दिएर बुझ्न आवश्यक छैन । कुरा के हो भने आज जहाँ नगरपालिकाको कार्यालय सञ्चालित छ, त्यो राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली, यसको मर्म र कार्यालयीय कामको व्यवस्थापन, हिजोका हाम्रो प्रयत्नहरू, हामीले गरेका कबोलहरूसामु यो प्रर्याप्त छैन । यसले विकल्प मागेको छ । स्थलगत विकल्पबारे कुरा धेरै उठेका छन् । यसैलाई तपाईंले छताछुल्ल भन्नुभएको होला ! यो त्यस्तो पनि होइन ।
चुरो कुरा भन्नुभयो नि ! विगतमा हामीले साविक स्थलको विकल्प भुटानी शरणार्थी स्थल रोज्यौं । यसैका लागि सर्वदलीय र सर्वपक्षीय सहमति बनायौं । यहीं सहमतिको पोथा टेकेर अदालत पनि आकर्षित भयो र यहीं नपा कार्यालय बनाउन निर्णय लियो, फैसाला ग¥यो । यहीं फैसाला समेतको दस्तावेज बोकेर हामी राजधानी काठमाण्डौं धायौं । कुन अवरोध आए अदालत जान भनेर स्थानीयमाझ गुरुमन्त्र बाँड्यौं । चुनावताका सार्वजनिक रुपमा कबोल ग¥यौं । राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त ग¥यौं । हामीले भने अनुसार जनमत उभियो । सरकार बन्यो । यहीं स्थलमा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम बन्यो । तर, पटकपटक गरिएको कबोल कार्यान्वयनको पक्ष ओझेल प¥यो । स्वभाविक थियो कि स्थानीय जनमतमा एकखालको चासो, सरोकार र कौतुहलता थपियो । अब नेतृत्वले यसको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । नगरपालिकाको कार्यालय भवन बन्नुपर्ने छ नै । यहाँ बनाए हुन्न ? होइन भने उपयुक्त तर्क सहित नेतृत्वमा जनमतसमक्ष ओर्लिन सक्नुपर्छ र परिस्थितिजन्य विकल्प के हो ? राय बझाउने गरी होइन, राय लिने गरी अघि बढ्नुपर्छ । पथरी कि शनिश्चरे ! भनेर विकल्प खोजिनु हुँदैन । यसमा राजनीतिक रंग हेरिनुहुँदैन । जोड–घटाऊ गरिनुहुँदैन । नत्र, सामाजिक सद्भावसँग जोडिएको प्रश्नले हामीलाई घेराबन्दीमा पार्छ । हिजोका हाम्रा विषयवस्तुलाई हामीले कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । होइन भने उपयुक्त विकल्प के हो ? कुशलतापूर्वक नेतृत्वले संवाद सहितको माहौल निर्माणमा अग्रसरता लिनुपर्छ ।
पथरी शनिश्चरेका लागि समुन्नतिका सम्भावनाहरू र चुनौतिहरू के–के देख्नुभएको छ ?
यहाँको विकासको सम्भावना भनेको यहाँको सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता, परस्पर निर्भरोन्मुख हार्दिकता, सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न जाति–भाषा–धर्मबीचको गाढा अन्तरघुलन, सामाजिक विविधता, विविधताका वावजुद हार्दिकतापूर्ण एकता पहिलो महत्वपूर्ण पक्ष हो । साक्षरता र पूर्ण साक्षरताको एउटा अवस्था, सहधर्म, सहअस्तित्व, इमानी र कर्मठ उद्यमशील नागरिकहरूको बसोबास, एउटा सामाजिक निष्ठामा समर्पित समाज, प्राकृतिक रुपले सुन्दर र हराभरा वनजंगलको काख, उर्बरक भूमिको सुन्दर बान्की, स्थायी प्रकृतिका खोलानालाको बहाव, शिक्षा र व्यापार–व्यवसायको केन्द्र आदि पक्षहरू यहाँको सम्भावना मात्र होइन, सम्भावनाको प्रचुरता हो । हामीले यसलाई आफ्नो आवधिक एवम् वार्षिक कार्यक्रममा डिजाइन गर्न सक्यौं भने झण्डै ३० वर्षसम्मको एउटा पुस्तान्तरण खपत भएको भुटानी शरणार्थी स्थल यहीं छ, लोपोन्मुख जाति, धर्म, समुदाय यहीं छ, यसलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ । पर्यटन प्रबद्र्धनको आधारशीला तयार गर्न सकिन्छ । यसको जगमा समुन्नत नगर बन्ने कुरामा दुइमत छैन ।
राजनीतिक प्रतिशोध, दलीय प्रतिशोध, अन्तरदलीय अन्तरविरोध यहाँको विकास निर्माणको पक्षमा एउटा वाधक तत्व हो, चुनौति त होइन । सुरक्षा व्यवस्थाप्रति केही प्रश्न उठेको थियो । यसको व्यवस्थापन भएको छ । प्राप्त राजनीतिक अवसरलाई हिजोको हाम्रो राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाइको प्रतिफलको रुपमा ग्रहण गर्न एकमना एकताका साथ उभिन र जोडिन सक्नुपर्छ ।
नगरको वार्षिक नीति–कार्यक्रममा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि दैनन्दिन सरोकारका विषयहरू किन प्राथामिकतामा परेनन् ? नीति निर्माणका क्रममा तपाईहरूको राय रहेन ?
वास्तवमा तपाई र मेरो सदिच्छाले मात्र नहुँदो रहेछ । नेतृत्वले बेलामा ध्यान दिन नसक्दा यी कतिपय विषयवस्तुहरू ओझेलमा परे, अपेक्षाकृत ढंगले सम्बोधन र व्यवस्थापन हुन सकेनन् । नीति–कार्यक्रमको फर्मेट कस्तो हुने ? फर्मेसन कसरी गर्ने ? समाजवाद उन्मुख समाजको अर्थचरित्र कसरी निर्माण गर्ने ? यसको प्रस्थान बिन्दु के हुने ? निकास कहाँ हुने ? समाजका अन्तरविरोध व्यवस्थापनबारे कार्यक्रममार्फत कसरी अघि बढ्ने ? हाम्रो आत्मगत अवस्था के हो ? जस्ता थुप्रै विषयमा पुग्दो मात्रामा सघन छलफल र विषयगत बिचार–विमर्श हुन पाएन/सकेन । शरीर तातिनु शारीरिक प्रतिक्रिया हो । यतिखेर हामीलाई ज्वरो आएको आभास हुन्छ र कडा पावरको सिटामोल खुवाइन्छ नि ! यस्तै–यस्तै भयो यसपटक यहाँ । जहाँ जसरी जसरी आवाज उठ्यो, उसरी उसरी मुख बुझो लगाउने अथवा टालटुल गर्ने प्रयत्न भयो ।
शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, लघुउद्यममार्फत रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु यहाँको प्राथामिक आवश्यकता हो । यसतर्फ पुग्दो मात्रामा ध्यान गएन । यी सबै विषय शिर्षकहरू विषयगत र समुहगत सहकार्य र परस्पर संवादबाट निष्कर्ष निकाल्न सक्नु पर्दथ्यो । यो सम्भव थियो । तर, गरिएन । मलाई सोध्नुहुन्छ भने यो प्रक्रियामा कहीँ कतै सामेल गरिएन । मैले उहाँहरूको नमिठो गुनासाका रुपमा सुनेको छु– सरोकारवाला समुदायको प्रतिनिधित्वमा समेत ध्यान दिइएन ।
तपाईं पेशाले पत्रकार । पत्रकारिता, यसको आचार र विधि व्यवस्थापनबारे तपाईंसँग रायसुझाव लिने काम भयो ? भएन । यहाँ झण्डै २९–३० वटा सामुदायिक विद्यालयहरू र यति नै संख्यामा निजी विद्यालयहरू छन् । तिनको गुणस्तर मापन, उच्च स्तरिय सञ्चालन, शैक्षिक एकरुपताका लागि नियमन, प्राविधिक जनशक्ति निर्माण र यसको व्यवस्थापनबारे विषयगत सरोकारवालासँग कतिपटक संवाद गरियो ? गरिएन । दर्जनौं बैंक र सहकारी संघसंस्थाहरू पथरी बजारमा छन् । स्थानीय लगानी, जनमुखी लगानी, स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र यसको व्यवस्थापनबारे प्रस्तावित योजना सहित कुनै बित्तिय संघसंस्थासँग मिटिङ बैठक भयो ? भएन । मोफसलमा आशलाग्दो कमर्शियल हवको रुपमा चिनिएको पथरी बजार र यसको नेता संगठन उद्योग वाणिज्य संघ क्रियाशील छ यहाँ । बजार व्यवस्थापन र व्यापारी–व्यावसायीका पीरमार्काबारे कतिपटक सरोकारवालासँग संवाद भयो ? भएन । वन, कृषि, जलका क्षेत्रमा कार्यरत दर्जनौं उपभोक्ता समितिहरू छन् यहाँ । सरकारसँगको विषयगत सहकार्यका लागि कुन उपभोक्ता समितिसँग कतिपटक मिटिङ बैठक भयो ? भएन । वडा नं. १ बाहेक सबै वडा शतप्रतिशत कृषिमा आधारित छन् । कृषि क्षेत्रका समस्या र स्थानीय सरकारका हैसियतले समाधान गर्न लिनुपर्ने पहलप्रयत्नबारे कुन कृषि संघसंस्था, कृषक वा विषयविज्ञसँग कतिपटक बसेर कुनै एउटा विषयमा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गरियो ? गरिएन । कृषि भनेको खाद्यन्य भण्डारण र पशुपालन दुबै हो । यसबारे थुप्रै परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रयत्नहरू कृषकबाट भएका छन् । यी योजना परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिवटा गृहकार्य भए ? भएन । समग्र बजेटको कति प्रतिशत बजेट कृषिमा छुट्टियो ? यहिंबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कुन स्वास्थ्यविज्ञसँग बसेर स्थानीय सेवाग्राहीले मागेको स्वास्थ्य अवस्था सुधारबारे संवाद गरियो ? कतिपटक गरियो ? गरिएन । हुनुपर्दैन कुनै रखरखाव ? अनि कसरी बन्छ– समृद्ध नेपाल रच्ने स्थानीय कार्यक्रम ? यस्तो अवस्थामा मानिसले कसरी गर्छ– स्थानीय सरकार र सरकारका कामकारबाहीलाई अपनत्वबोध ? गम्भीर हुन जरुरी छ ।
स्थानीय सरकार र यसको सुव्यवस्थित सञ्चालन संघीयता र यसको कार्यान्वयनको मर्मसँग जोडिएको राजनीतिक विषय हो । हामी यहाँनेर असफल हुनु भनेको सिंगो व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली असफल हुनु हो । हामी असफल हुने कुराको कारक बन्नु हुँदैन । यो छुट कसैलाई पनि छैन ।
राय सम्प्रेषणको अवसर दिनुभयो । यसका लागि धेरै–धेरै धन्यवाद !
प्रस्तुति ः भूमिप्रसाद पाठक